Annaga nagu saabsan - Guangdong Xinling Industrial Co., Ltd.
Xlin-SMTwuxuu diiradda saarayay garoonka SMT 15+ sano.
Waxaan haynaa silsilad sahayda qalabka SMT oo dhamaystiran oo ah summada waaweyn ee suuqa, iyo agabka kumanaan agabka agabka ah.Waxaa naga go'an inaan daboolno baahiyaha macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha.Bixinta xalka ugu fiican, waxay ka caawisaa macaamiisha inay dhimaan kharashaadka iyo horumarinta waxtarka.
Waxaan ku shaqaynaa SMT oo dhamaystiran ganacsiga iibka qalabka, ganacsiga kiraynta, ganacsiga agabka, ganacsiga dayactirka.
Injineerada heerka khabiirka ah waxay bixiyaan dayactirka qalabka, dayactirka, tijaabada CPK, sixitaanka khariidaynta, hagaajinta hufnaanta wax soo saarka, hagaajinta guddiga, dayactirka mootada, dayactirka quudiyaha, iyo adeegga hal-joojin ee dhejiska ah sida dayactirka cinwaanka filimka), qalabka SMT ee hadda jira iyo agabka ganacsiga ayaa daboolaya. mashiinada meelaynta (ASM, Fuji, Juki, Yamaha, Samsung, Panasonic, Universal, Saki iwm) mashiinada daabacaadda, SPI, mashiinada meelaynta, foornooyinka dib-u-qulqulaya, alxanka hirarka, AOI, X-RAY, guddiga kala qaybinta mashiinka, plug-in mishiinka, koolada, mashiinka calaamadaynta laser iyo qalab kale ayaa dabooli kara baahida iibka iyo macaamiisha wax soo saarka isku mar.
Tayada wanaagsan, adeegga, iyo hal-abuurka sida falsafadeena ganacsi, waxay qaadataa daacadnimada sida aasaaskayaga, waxay kuxirantahay tayada badbaadada, waxay ku tiirsan tahay hal-abuurka si loo raadiyo horumar, wanaajiso heerka maamulka gudaha, iyo dibaddaba waxay kordhisaa tartanka.Anagoo diirada saarayna macaamiisha, waxaan sii wadi doonaa inaan siino tignoolajiyada sare, tayada sare leh, iyo alaabada iyo adeegyada hufan.
Waxaan had iyo jeer ku dhaqmi jirnay mabda'a ah "macmiilka ugu horreeya, tayada ugu horreysa", ka shaqeynta horumarinta, horu-socodka, iyo hal-abuurka joogtada ah, had iyo jeer u hoggaansamaya suuqa iyo baahida isticmaalaha, oo ku salaysan nidaam maamul oo hufan iyo hubinta tayada. nidaamka, shirkadda waxaa si geesinimo leh loo aasaasay Tide, had iyo jeer safka hore ee warshadaha, si joogto ah wax cusub, sii wadaan in ay bixiyaan macaamiisheena la tayo sare leh, alaabta xirfadeed-farsamada sare iyo adeegyada.
Shirkaddayadu waxay ku taal Shenzhen, Shiinaha, waxayna leedahay nidaam gaadiid oo dhammaystiran, oo ay weheliso jawaabta waqtiga-dhabta ah ee su'aalaha macaamiisha, si dhakhso ah loo daboolo baahiyaha macaamiisha.